NIFANILIHAN’IREO MANAMPAHEFANA NY FANDRAISANA ANDRAIKITRA : Zazavavikely 5 taona mpirenireny eny 67ha nisy nanolana
Tranga nampalahelo sy nampihetsi-po ny mponina teny 67ha manodidina ny “Mada hotel” iny ny fanolanana nihatra tamin’ny zazavavikely vao dimy taona monja, ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny folo ora sy sasany alina tany ho any. 13 mars 2019
Araka ny tatitra voaray tamin’ireo andian’olona nahita maso ny zava-niseho teny an-toerana dia ireny ankizikely mpatory an-dalana tsy misy mpiahy ireny no niharan’ny herisetra ity. VAraka ny fitantaran’ireo nanatri-maso dia simba tanteraka ny maha vehivavy azy tamin’io fotoana io. Tovolahy iray tsy misy mahafantatra teny amin’ny manodidina no nisy nahatsikaritra ho nanao izany, ka rehefa vita ny nataony dia lasa nandositra izy.
Nitaraina ho naharary ilay zaza no sady nitomany. Ny andro alina, tafatsoaka ny nahavanon-doza, ny hany vahaolana dia nanatona ny mpitandro filaminana izay akaiky azy ireo nitondra ny raharaha, kanefa dia toa tsy nisy nandray andraikitra akory fa samy nihainohaino ary nanilika sy nilaza fa tsy anjara asan’izy ireo ny misahana izany, hany ka vita ho azy teny fotsiny. Ity nahavanon-doza ihany koa votsotra ho azy teny rehefa vita ny tiany natao.
Tsy manan-jo hokarakaraina ve ny zaza tsy misy mpiahy toy izao ?
Betsaka ny mponina teny an-toerana no sanganehana naneho ny alahelony noho ny tsy firaharahan’ny mpitandro filaminana ny zava-nitranga. Noho ny maha mpirenireny azy ve no tsy andraisana andraikitra ? Izany hoe tsy manan-jo hokarakaraina sy harovana toy ny vahoaka sy ny zana-bahoaka ve izy satria ny ray aman-dreny natao hiaro azy aza tsy hita ? Io ny fanontaniana mipetraka narahina hatezerana avy amin’ny rehetra. Marihina anefa fa mitondra takaitra ilay zaza ankehitriny, soa ihany aza fa ireo teo amin’ny manodidina no niray hina niahy sy niantra ity zaza.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra araka izany mba handray andraikitra sy hanao fanadihadiana ny raharaha tahaka izao. Lasibatry ny herisetra ny madinika raha toa ka tsy asiam-bahaolana ny fitsinjovana ireo mahantra tsy manan-kialofana.